INingizimu Afrika ekugcineni iyayivala incwadi nge-AstraZeneca | Scrolla Izindaba
INingizimu Afrika ekugcineni iyayivala incwadi nge-AstraZeneca
UNgqongqoshe wezeMpilo uZweli Mkhize umemezele ngeSonto ukuthi iNingizimu Afrika isidayise imithamo yayo eyisigidi esiyi-1.5 yomuthi wokugoma i-Oxford-AstraZeneca, ngaphezu kwezinyanga ezimbili iwuthengile.
Yonke imithamo eyizigidi eziyi-1.5 ayisetshenziswanga ngoba ucwaningo oluncane lasemtholampilo lakhombisa ngenyanga edlule ukuthi umuthi uzonikeze ukuvikelwa okuncane ekuguleni okuncane kuya kokulingene okubangelwa ukuhlakahluka kwe-coronavirus.
Lesi sinqumo senziwe saphikisana neseluleko sochwepheshe abaningi bezokwelapha, abakhomba ukuthi umuthi wokugoma kungenzeka ukuthi usasebenza ekuvikeleni ukugula okubi nokufa okubangelwa yigciwane.
Ngasekuqaleni kwale nyanga, uSolwazi uShabir Madhi, umphenyi oyinhloko wocwaningo lomuthi wokugoma i-AstraZeneca eNingizimu Afrika, wathi “ufikelwe yithemba” ngesinqumo sikahulumeni sokumisa ukukhishwa komuthi.
Ngokushesha ngemuva kwalokho, uhulumeni wanquma ukuthengisa inqwaba yemithi yokugoma ngokushesha emazweni angaphansi kwe-African Union (i-AU), lapho okuvelele kakhulu kwaleli gciwane eNingizimu Afrika kwakungadumile kangako.
Isitatimende sabezindaba esikhishwe nguMnyango Wezempilo sichaza ukuthi “emasontweni adlule uMnyango bekufanele uqinisekise ukuthi wonke amazwe angamalungu akhonjwe yithimba lokuthola umuthi wokugoma i-AU njengabathola le mithi yokugoma, ayayithobela imigomo futhi athole zonke izimvume zokulawula, izimvume kanye namalayisense okukhipha imishanguzo emazweni abo.”
Isitatimende sengeza ukuthi ukuthunyelwa kokuqala kwemithi yokugoma – imithamo yokuqala eyisigidi eyatholwa yiNingizimu Afrika – kuzosatshalaliswa emazweni ayisishiyagalolunye angamalungu, ngenkathi eyizi-500,000 esele izothunyelwa kwamanye amazwe amahlanu.
Isitatimende asicacisi ukuthi imithi yokugoma izothunyelwa emazweni maphi, futhi asisho nokuthi la mazwe ayikhokhela malini le mithi.
Isitatimende, nokho, “siqinisekisa ukuthi imali yokuthenga ephelele itholwe nguMnyango ngoMsombuluko ngeviki eledlule.”
Umthombo wesithombe: @htTweets